Ny Dos sy don'ts ny Fivoriana Niaraka Tokan-tena ireo Vehivavy Aziatika
Ny Dos sy don’ts ny Fivoriana Niaraka Tokan-tena ireo Vehivavy Aziatika
Mampiaraka Aziatika ny vehivavy dia azo antoka fa mahazo malaza eo amin’ny tandrefana ny olona toy ireo vehivavy Aziatika dia raisina ireo vehivavy tsara tarehy indrindra eto amin’izao tontolo izao. Na izany aza, maro ireo fotoana izay ny olona dia tsy manana ny tsipiriany momba ny fomba daty ireo vehivavy Aziatika, dia hiafara amin’ny marikivy ny fifandraisana, izay tsy miasa avy tsara. Ireo vehivavy aziatika manana soatoavina nentim-paharazana sy mankasitraka raha manao ezaka kely eo amin’ny fahatakarana ny fianakaviana kolontsaina. Raha te daty Aziatika iray tokan-tena, hitandrina ireo zavatra ireo ao an-tsaina rehefa ianao farany hitsena azy. Ireo vehivavy aziatika dia akaiky ny fianakaviany, noho izany dia tokony hiezaka ny hahatakatra ny vehivavy sy ny fianakaviany hahazo ny tahaka azy ireo, na dia mihaona azy ireo, raha toa ka liana ianao mampiaraka azy. Raha toa ka maneho fanajana ho an’ny fianakaviany, dia ho hita ho azy fa ianao dia fianakaviana-mirona, ary izy dia toy ny anao na dia bebe kokoa. Niverina ny tamin’ny andro fahiny, ny tovovavy’ ny ray aman-dreny vita ny fanapahan-kevitra ny fanambadiana, fa ankehitriny tokan-tena dia avy any Azia haka ny manokana ny fiainana fanapahan-kevitra. Na izany aza, ny fanekena ny ray aman-dreny dia mbola zava-dehibe ho azy ireo.
Tokan-tena ireo vehivavy Aziatika kokoa ny fotoana maharitra amin’ny fifandraisana, ka tsy mitondra azy ireo toy ny olon-tsotra tokan-tena hihaona ao amin’ny fikambanana. Rehefa mampiaraka azy ireo, tsy maika azy ireo ho any na inona na inona? Izy ireo dia te-haka ny zavatra miadana sy tsy handray ny fifandraisana bebe kokoa raha toa ianao tsy mahazo aina ianao. Ianao dia tsy maintsy manaja ny vehivavy sy ny fomba fijeriny, ary rehefa anao handresy ny fony, dia ho tsy mivadika aminao mandrakizay. Indray mandeha Aziatika vehivavy manambady, tsy mijery ny any ivelany, ary izy ireo ara-dalàna tsy mamitaka ny vadiny. Ireo vehivavy aziatika efa lalina ara-kolontsaina fakany, ka ho azo antoka ianao, fara fahakeliny, ny fahalalana fototra momba ny kolontsaina, alohan’ny hanombohanao ny mampiaraka azy na hihaona aminy ho an’ny fotoana voalohany. Na akora mizatra amin’ny kolontsaina raha vao manomboka miaina ianao na izany aza, ny akora tena toy izany raha toa ka maneho ny ezaka mba hahatakatra ny kolontsaina ihany koa. Raha maro ireo tokan-tena ireo vehivavy Aziatika ireo asa-mirona, dia mbola manana reny voajanahary, ary tsara homemakers. Tiany ny vadiny mba ho mpitarika ny fianakaviana, ary izany no antony tokony hampiseho ny fahefana. Izany tsy midika fa tokony hitondra ny Aziatika vadiny ho toy ny faharoa ny olona eo amin ny fiainanao fotsiny ianao dia mampiseho ny fanapahan-kevitry ny fahafahana. Izany dia hita ho azy fa ianao dia tompon’andraikitra ny olona, ary dia ho afaka mikarakara ny fianakaviana.
Ataovy ao an-tsaina fa ny Aziatika ny vehivavy saro-kenatra
Noho izany, raha Aziatika iray tsy hampiseho fandraisana andraikitra, izany no tsy midika akory izany fa izy no tsy liana amin’ny fiarahana. Ireo vehivavy ireo dia mino fa ny olona dia tokony handray ny dingana voalohany, ary dia toy izany no miandry anao ny antso, hafatra, na hihaona.
Raha toa ka roa te-hihaona, tsy afaka manantena ny mba hiteny izany
Indraindray, izy dia tsy hilaza eny, kanefa vao tsiky fa tsy. Tokony mba hahitana ny hevitry ny tsiky sy ny blushes mba hahatakatra ny Aziatika daty. Ireo vehivavy aziatika mihevitra fa ny olona dia tsy maintsy ho sahy soso-kevitra. Zavatra iray momba ireo vehivavy Aziatika dia ny hoe izy ireo ny mijery tanora be noho ny taonany, noho izy ireo petite sy mihantahanta. Na Sinoa, Filipina, Tailandy, ny Vietnamiana, izy rehetra ireo dia tsara tarehy ary malefaka ny hoditra. Koa, satria izy ireo tsy amin’ny ankapobeny efa mampiady saina ny fiainana, izy ireo no matanjaka sy mavitrika. Raha Asian ankizivavy dia mety ho hita ao amin’ny toeram-pivarotana sy ny sekoly, dia saro-kenatra sy tsy hanokatra amin’ny olon-tsy fantatra. Izany no mahatonga ny fiarahana Aziatika tokan-tena an-tserasera eto dia hevitra tsara, toy ny vohikala ity dia ny toerana ho an’ny vehivavy Aziatika ny fiarahana, ka dia azo antoka fa tsy izy rehetra misy, ary te-hanangana lava-fifandraisana maharitra. Mampiaraka ireo vehivavy Aziatika dia tsy tena sarotra, fa tsy mora loatra na. No ataovy azo antoka ianao hita sahisahy sy matoky tena ianao rehefa daty ireo vehivavy Aziatika, satria izany no iray amin’ny lehibe toetra tadiavinao izy ireo
← Afaka hiatrehana ny fifandraisana amin'ny ankizivavy Shinoa. Iraisam-pirenena Mampiaraka Torohevitra ho an'ny Lehilahy Mitady Vady Vahiny